Mahadum Zonguldak Bülent Ecevit iji tinye ndị ọrụ agụmakwụkwọ | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụMahadum Zonguldak Bülent Ecevit ga-enweta ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ
05 / 12 / 2019 Ọrụ, General
mahadum zonguldak ga-enweta ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ
Mahadum Zonguldak Bülent Ecevit ga-ewe ndị ọrụ agụmakwụkwọ; Iwu ahụ maka usoro na ụkpụrụ dị mkpa maka itinye Central Exams and Exams Exams ka etinyere na oge a ga-etinye maka ndị ọrụ ngalaba na-abụghị ndị ọrụ agụmakwụkwọ bipụtara na Official Gazette ụbọchị 09.11.2018 na 03.10.2019 maka itinye akwụkwọ na nhọpụta a ga-eme ka ndị ọrụ agụmakwụkwọ nke Zonguldak Bülent Ecevit University ga-etinye n'ọrụ.
Startbọchị ọkwa mara ọkwa: 05.12.2019
Oge ngwụcha nke ngwa: 19.12.2019
Noticebọchị Nleba Anya Ntughari Ego: 25.12.2019
Exambọchị Nnwale Nbanye: 30.12.2019
Descriptionbọchị Nkọwapụta Oge: 07.01.2020
Oge nke ngwa bụ ụbọchị 15 site na ụbọchị e bipụtara mgbasa ozi.
Dabere na ọnọdụ izugbe na nke pụrụ iche nke ngwa a, a chọrọ ka ndị chọrọ itinye akwụkwọ maka ngalaba ọrụ ha tinye akwụkwọ ndị a na-arịọ na arịrịọ ka aga-ewegara ha n'ọfịs Dean ma ọ bụ Schoollọ Akwụkwọ Ọzụzụ Dị elu;
3- Photocopy nke Bachelor, nke asambodo ngabiga nke Master na nke Doctoral ma ọ bụ mmepụta E-Gọọmentị, (Ekwesịrị ịnabata akwụkwọ ikike inweta diplọma nke si mba ọzọ.)
4- Undergraduate, Master na Doctoral Transcript photocopies,
5- Photocopy nke Asambodo Asụsụ Asambodo
6- Otu foto,
Asambodo nyocha nke 8- Central Akwụkwọ (ALES),
9- Asambodo Ndetu Ikpe (1 kacha ọhụrụ (otu)) kwa ọnwa)
10- Akwụkwọ na-ekwupụta na a machibidoro ọrụ ndị agha agha, kwụsịtụrụ ma ọ bụ tụnyeere ndị nwoke.
11- akwụkwọ akwadoro / akwụkwọ ahụmịhe,
12- NUMdị Ngwa (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html okwu).
- A ga-eme akwụkwọ anamachọihe n'onwe gị ma ọ bụ zitere ya ozi.
- A gaghị anabata igbu oge na post ahụ ma ọ bụ na anabataghị ngwa ma ọ bụrụ na otu n'ime akwụkwọ ndị a dị n'elu na-efu.
- Adreesị ịntanetị ebe a ga-ekwuwapụta nsonaazụ nsonaazụ ya: http://w3.beun.edu.tr
- 1 (otu) mmadu apughi itinye ya karia ndi oru n’otu oge. A kagbuo itinye akwụkwọ anamachọihe niile nke ndị chọrọ ime ihe ruru ka otu ndị ọrụ karịa.
- Ndi a huru na ha ghaworo ebubo ugha n’ime akwukwo a achoro ka a ga-ahuta na ha adighi nma. Ọ bụrụgodi na a họpụtara ha, a ga-akagbu ha, ha agaghị ekwenye ikike ọ bụla.
- Mahadum anyị nwere ikike ime mgbanwe na kalenda ule ma kagbuo ọkwa ọ bụla nke ọkwa. A na-amara ọkwa niile emebere na websaịtị mahadum. O dighi ozi edere ede banyere mmadu a.
ỌKỤKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ
(2) Site na mkpebi nke ụlọ omebe iwu, ụlọ akwụkwọ mahadum na ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nwere ike ikpebi akara karịa ALES na akara asụsụ mba ọzọ akọwapụtara na Iwu a, belụsọ maka ndị nkuzi nkuzi na ngalaba mmụta pụrụ iche nke Kọmitii Mmụta dị elu nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kpebiri.
(3) Ka ejiri ya gbakọọ klas nke ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na pregradu gụsịrị akwụkwọ na nyocha nke ikpeazụ.
Mkpebi nke Council Mmụta Dị elu kpebiri site na mkpebi nke ogo 4 na 5 maka usoro ọkwa 100. Ndị okenye nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kpebiri na-ekpebi nhazigharị nke usoro grading ndị ọzọ na 100 gracing.
(4) Ndi umu akwukwo, n'asusu nke nkuzi ya na mmemme nkuzi n ’ndi nkuzi ya na ntinye a gha enyere ndi nkuzi n’usoro ihe omume ahu; Na nhọpụta a ga-emere ndị ọrụ nkuzi dabere na paragraf nke mbụ (i) nke mbụ paragraf nke 4 nke 11 / 1981 / 2547 ụbọchị na 5 / 80 / XNUMX, nhọpụta a ga-eme ka ndị nkuzi n’asụsụ ahụ dị mkpa; Na mmekọrịta mba ụwa na nhọpụta nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị elu, a ga-achọ onye nkuzi ga-arụ ọrụ na nkeji asụsụ etinyere n'asụsụ ala ọzọ ka ndị Council of Higher Education nabatara ma ọ bụ akara nha anya site na udomo oro a nabatara dịka nke dakọtara.
Na ntinye nke ndị na-agụghị akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ gụsịrị ndị ọrụ nkuzi; A ga-etinye ntinye nke usoro iwu Dair na Ndezigharị nke Iwu na Usoro na Ntinye Elele nke Central Exams na Ntinye Nke Onye Ọrụ Na-abụghị Ndị Mmụta Ọmụmụ Açık nke edepụtara na Official Gazette nke akara 03.10.2019.
(1) Ndị a ga-ahọpụta na ngalaba nke izizi nke Kọmitii Mmụta dị elu nke ndị kọleji nwere ọrụ aka kpebisiri ike inweta akara mmụta nna ha ukwu ma ọ bụ nwee ọhụụ ma ọ dịkarịa ala afọ abụọ ma ọ bụrụ na ha gụchaa akwụkwọ.
(1) achoghi ihe ndi choro nyocha nke Central maka ndi mezue akwukwo doctorate ma obu ogwu, dentistry, pharmacy na veterinary medical expert ma obu ikike nka, onye aga ekenye ya na ngalaba akwukwo ndi ulo akwukwo ndi ulo akwukwo di elu choro, ma ndi luru oru ma obu oru n’ulo akwukwo nke ulo akwukwo di elu.
(2) a ga-eme ka ndị nkuzi aka rụọ ọrụ nkuzi ma ewezuga ndị nkuzi na paragraf nke anọ nke 6 nke Iwu a.
Achọghị asụsụ mba ọzọ maka ngwa.
OBIARA Ọ bụ nkụzi. YDS MA Ọ B ÉARA EGO Nkowasi
ÇAYCUMA VOCATIONAL kura
Nchịkwa njem ụgbọelu 1 Ka m gụchaa na Ngalaba Nchịkwa Obodo ma ọ bụ Ngalaba na-ahụ maka Avigbọ elu. Inwe akara ugo mmụta banyere ihe osise
1 50 Kọmputa na Injinịa Injin, Kọmputa Science Injinia, Kọmputa Injinia, Kọmputa na Informatics Engineering, Information Systems Engineering, Science Science and Engineering, Injinia Kọmputa, Injinịa Kọmputa, Igwe Ọdụ-Igwe-Igwe-Igwe, Igwe Ọdụ Iki na Kọmputa Iji gụchaa otu n'ime usoro agụmakwụkwọ ka asambodo wee nweta ma ọ dịkarịa ala akara nna ukwu na ngalaba ọzọ. (A ga-ahọpụta gị na ngalaba otu nke ga-arụ ọrụ na nkeji etinyere n'ime Rectorate)
1 50 Iji bụrụ onye gụsịrị akwụkwọ na Asụsụ Turkish na Akwụkwọ Omenala ma ọ bụ Nkụzi Asụsụ Turkish ma nwee akara ugo mmụta nna ya ukwu na mpaghara metụtara ya.
ÇAYCCUM VOCATIONAL VOCATIONAL OF THE FINOD AND AGRICULTURE
AKWKWỌ AKW .KWỌ AK LKỌ 1 Gụsịrị akwụkwọ site na Ngalaba Biology. Ngụsị akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Molecular Biology ma ọ bụ Molecular Biology na Genetics na PhD na Molecular Biology na Jenetik. Iji mee ka a mata na usoro mmụta biochemistry na physiology nwere ahụmịhe na nyocha nke ụlọ nyocha nakwa na a zụrụ ha na ezigbo ụlọ nyocha, ike nke nnwale na mmezi mmezi.
Zonguldak Bülent Ecevit Mahadum Ndị Ọzụzụ Ndị Mmụta Mahadum